Yakapfuma uye yakapusa kugadzirira yogati nekeke remonimu. | Kicheni Mapepa
Yogati nekeke remonimu
Montse Morote | 29/04/2021 09:05 | Keke
Yogati uye yemonji sponge keke, yakasarudzika pakati pekeke rechipanji, yakapusa uye yakapfuma kwazvo. Iyi yekubheka ndeimwe yeakareruka kugadzira nekuti negirazi reyogati isu tinozoishandisa sechiyero chekuisa zvigadzirwa zvekeke.
Lemon yakanaka kumadhizeti, iyo iasidhi yekubata inopa yakanakisa kunaka. Mumakeke zvinwiwa ndezvekuti zvakapfava, asi kunze kweiyo yoghurt yemurimu iwe unogona kuwedzera zest yemonimu, izvi zvinowedzera kunaka kweiyo yogati nekeke remonimu.
Kugadzira keke, chiyero chemagirazi chichava cheiyo yogati.
ruomba kuparadzira muforoma
Kugadzirira iyo yogati nekeke remonimu, isu tinotanga tagadzirira izvo zvigadzirwa. Ivo vanofanirwa kuve vari tembiricha yemukati, saka tichavagadzirira maminetsi gumi nemashanu zvisati zvaitika.
Isu tinotora iyo yoghurt yemonimu kunze kwegirazi, kuishambidza uye kuishandisa kuzviyero.
Isu tinoshandura ovhiri kuita 180ºC nekupisa kumusoro uye pasi.
Mundiro tinoisa mazai neshuga yatinosanganisa netumwe tumiti.
Isu tinowedzera iyo yogati uye zest yemoni. Isu tinosanganisa.
Wedzera mafuta, sanganisa zvakanaka.
Kuti uwedzere hupfu, tanga tesefa pamwe chete nehamvuropu yembeu.
Tiri kuiwedzera zvishoma nezvishoma uye nekusanganisa, seizvi, kusvikira hupfu hwese hwanyatsobatanidzwa.
Isu tinowaridza chando chebota neupfu hushoma, wedzera rese batter rekeke woisa muhovhoni muchikamu chepakati.
Tichazvisiya kwemaminitsi makumi mana, zvinogona kusiyana zvichienderana nehovhoni. Kana taona kuti ndiyo tichairova nezino, kana ikabuda yakaoma ichagadzirira kana tikasaisiya nguva yakati rebei kusvikira yagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Keke » Yogati nekeke remonimu
Soseji muwaini chena